Dad ku dhintay is-miidaamin ka dhacay nawaaxiga dekadda Muqdisho
Dad ku dhintay is-miidaamin ka dhacay nawaaxiga dekada Muqdisho
Ciidamadda ammaanka ayaa durba tegay meesha ay wax ka dhaceen "si ay u gutaan waajibaadkooda".
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax noociisa ahaa is-qarxin lagana maqlay qaybo kamid ah Muqdisho ayaa ka dhacay degmada Xamar Jabab gaar ahaan maqaayad ku dhow dekadda caasimadda dalka Soomaaliya.
Ismaaciil Oranje, afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta xukuumadda dhacdey, ayaa bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka wuxuu ku shaaciyey in weerarka uu ahaa is-miidaamin uu naftii halige ka dambeeyay.
"Warar hordhac ayaa xaqiijinaya in qof xiran jaakadda Qaraxa uu isku dhex qarxiyay maqaayad laga cunteeyo oo lagu magacaabo Luul Yemeni oo ku taalla Degmada Xamarjajab ee Gobalka Banaadir," ayuu yiri.
Ma jirto koox illaa iyo haatan sheegatay mas'uuliyadda falkaan, balse waxaa dhacdooyinkan oo kale looga bartay xoogaga gacansaarka la leh shabakadda argagixisadda ah ee Al-Qaacida ee Al-Shabaab.
"Qofka isqarxiyay ayaa rabay in uu gudaha u galo maqaayadda si uu u laayo dadka shacabka ah ee ka cunteynayay Maqaayadda, hasa yeeshee mid kamid ah ilaalada maqaayadda ayaa isku duubay dhagarqabaha kaasoo markiiba qaatay go'aan ah in uu isku qarxiyo isla halkii lagu qabtay," ayuu Orange raaciyey.
Sidda laga soo xigtay fahfaahinta afhayeenka, laba qof ayaa ku dhintay weerarka, halka mid kelana uu kasoo gaarey dhaawac.
Wuxuu qoraalkiisa raaciyey: "Ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta uu ka dhacay qaraxa naftii halignimada ah, iyagoo ku howlan gudashada waajibaadkooda".
Al-Shabaab ayaa inta badan waxay bartilmaameedsataa xarumaha ganacsiga marka ay ka biyo-diidaan bixinta lacagta baada ah ee ay u bixiyeen Zakawaadka, taas oo dowladda horey digniin culus uga soo saartey.
Mareykanka ayaa horey wuxuu horjoogahaan ku goobayey aduun dhan 5 milyan oo Doolar.
Dabley damacsaneyd in ay dil ka fuliso Muqdisho oo nolosha lagu qabtay
Soomaliya 12.04.2020. 13:13